بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ:Bayaan Talo iyo Taageero – Rasaasa News
Jan 12, 2012 Taliyo Taageero, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ Bayaan Taageero iyo Talo ku socota Shirka Taleex.
Anaga oo ka kooban dhamaan qaybaha bulsho ee qurbajoogta Somaaliyeed; culumaa’udiin, aqoonyahan iyo indheer-garadka rag iyo dumarba leh oo ay aragtiyi midaysay.
Waxaanu taageeraynaa qawl iyo ficilba, shirka aayo-ka-tashi ee beelaha SSC uga socda magaalada taariikhiga ah ee Taleex. Taageero bacdigeed, waxaanu kula talinaynaa guud ahaan shacabka gabalada SSC, gaar ahaana inta loo igmaday masiirka ummadda goboladaasi; in danta aayo-katashi ee Taleex loo fadhiyo lagu raadsho talada iyo amarka Eebe ee kor ku xusan, ee ay murtidiisu tahay, “u hogaansamid Alle iyo Ergaygiisa, ka fogaansho khilaaf iyo xafiiltan dhexdiina ah iyo tanaasul iyo isu-sabir looga xal-gadho hadba wixii la isku qabto”. اوكماقالوهوأعزّاقائلين: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Waxaanu uga digaynaa beesha Isaaq, caridaada afeed ee shirka Taleex, taas oo sideeda oo aan wax kale lagu darin, ku ah fal-dambiyeed jawaab mudan. Waxaanu ugu baaqaynaa ragga sheeganaya cuqaal-dhaqameedka beeshaasi ee uu ka midka yahay Suldaan Maxamed Suldaan C/qaadir Oo Ka… – cadceed.com inay joojiyaan durbaanka caolaadeed ee ay carabka ku garaacayaan. Waxaanan xusuusinaynaa caaqilka iyo intii ku fikir ah ee la qabta in beelaha kale ee gobalka wax degan ay ku khasbi karaan fikir aynan la qabin, in sooyaalka taariikheed ee dadka iyo deegaanka goboladaasi ka facwayn yahay 20kii sano ee tegay iyo xuduud-daneedii uu Ingriis sameeyey intaba; Dhulbahantana waxaa uu mid ka mid ah yahay, dhogor badan oo Libaax hurda ku taala! Sidaasi darteed waxaanu ku talinaynaa in laab la kac iyo riyo-maalmeed aan meel fog gaadhayn ayan sabab u noqon dagaal sokeeye oo dib uga billowda gobolada lagu tiriyo inay amni ahaan dhaamaan waddanka intiisa kale.
Gebogebadii, waxaanu guud ahaan ugu baaqaynaa ummada Somaaliyeed in loo hogaansamo awaamiirta Eebe ina faray, ee ay ka mid tahay ka fogaansha qabyaaladda Somaali kala geysay, iyo taageeridda xaqa iyo wixii soo celinaya midnimad ummadda Somaaliyeed.